မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး: Antivirus ကို APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး: Antivirus ကို, Web ကို Scan ကို & App ကို Lock ကို
မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး: Antivirus ကို, Web ကို Scan ကို & App ကို Lock ကို APK ကို
ဒါဟာသင့်ရဲ့ device များလုံခြုံဖြစ်ကြပြီးသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, ပုဂ္ဂလိက data တွေကိုပုဂ္ဂလိကအဲ့ဒီအချိန်မှာသေချာအောင်ပိုမိုအရေးပါသောကဏ္ဍတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်ဘယ်တော့မှရဲ့။ အခုတော့ McAfee ကအားလုံးကိုအသစ်ချီးမြှင့်အနိုင်ရတဲ့, McAfee ကမိုဘိုင်းလုံခြုံရေး app တစ်ခု before.Introducing ထက်သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းအတွေ့အကြုံပင်ပိုကောင်းစေလိုကူညီပေးနိုငျ! McAfee ကမိုဘိုင်းလုံခြုံရေး, အခမဲ့သန့်စင် antivirus ကိုနှင့်ဖုန်းလုံခြုံရေး app တစ်ခု, သင့်ပုဂ္ဂလိက data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဆုရ Anti-Theft, စက်ပစ္စည်း Finder ကို, App ကိုသီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, Antivirus ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူသင့်ရဲ့ Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်, Anti-Spyware, Anti-Malware ကို , ဗိုင်းရပ်စ် Cleaner နှင့်ဖယ်ရှားရေး, ကို Safe Browsing, ဝိုင်ဖိုင်လုံခြုံရေး, စွမ်းဆောင်ရည် Optimization, SMS ကို Backup ကို, ဆက်သွယ်ရန် Backup ကိုနှင့်အခြားသောမိုဘိုင်းလုံခြုံရေး app တစ်ခု features တွေ။
လတ်ဆတ်သစ်ကိုဒီဇိုင်း & ထုတ်ကုန် optimization:
- သင့်အကြိုက်ဆုံး features တွေကိုဝင်ရောက်ဖို့လွယ်ကူ app ကိုအညွှန်း
- မည်သည့် blackhat လှုပ်ရှားမှု, ဗိုင်းရပ်စ်တွေ spam များကို, အန္တရာယ်များ apps များနှင့်ဝိုင်ဖိုင်အန္တရာယ်တွေ Enhanced စကင်
- McAfee ကဂရိတ်ခြိမ်းခြောက်မှုထောက်လှမ်းရေးမှတဆင့်နောက်ထပ်အင်အားကြီးလုံခြုံရေးအင်ဂျင်ကို
- တိုးချဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းများအတွက်သိုလှောင် Cleaner, ကိရိယာ optimization နှင့်မှတ်ဉာဏ်တက်လွတ်မြောက်လာ
▪ Device ကို Lock ကိုလုံခြုံရေးနှင့်သူခိုး Cam: သင်၏ device ကိုသော့ခတ်ကကိုင်ပြီးလူတစ်ဦး၏တစ်ဦးလျှပ်တစ်ပြက်ကြာ
▪ Anti-Spyware: သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရယူသုံးစွဲနိုင် phishing နှင့်ရရှိမှုကနေသူခိုးတွေရပ်
▪အဝေးမှမှာ Data Wipe: ရွေးချယ်ထားသောပုဂ္ဂလိကဒေတာ Wipe သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Anti-ခိုးယူ features တွေနှင့်အတူစက်ရုံတွင် settings ကိုမှပြန်ပြောင်း
▪ SMS ကို Backup ကို, ဆက်သွယ်ရန် Backup ကိုများနှင့်ဒေတာများ Restore *
▪, Track Locate နှင့်နှိုးစက်: မြေပုံတည်နေရာဝန်ဆောင်မှုနှင့်သင်၏ဖုန်းကိုရှာပါတဲ့ဝေးလံခေါင်သီနှိုးဆော်သံအသံ, သို့မဟုတ်ပါကခြေရာခံဘို့ခြေလှမ်း-by-step အကူအညီရ
▪ Anti-Theft Uninstall ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်: သင်၏ကိရိယာပေါ်တွင်မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး app ကို uninstall လုပ်နေတဲ့သူခိုးကိုသိမ်းဆည်းထားပါ
▪အဝေးမှဆိုစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ကိုအသုံးပြုပြီးဝဘ်ပေါ်တယ် @ mcafeemobilesecurity.com/ ထံမှသို့မဟုတ် SMS ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ antivirus ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစီမံခန့်ခွဲ
တခြား features: သင့် Android Wear, အရေးပေါ်တွဲပါ
▪ကလေးများ Mode ကို: သင်၏လေးတွေ apps ရာထိန်းချုပ်ရေးသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်တွေ့မြင်နိုင်သည် **
▪ App ကို Lock ကို: လုံလုံခြုံခြုံအထိခိုက်မခံအကြောင်းအရာနှင့် app များကိုသော့ခတ် **
▪ App ကိုသီးသန့်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှု: သိ apps များအန္တရာယ်မှာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကို privacy ကိုသွင်းထားရသော
▪ blocker နှင့် SMS ကို Filter ကို Call *
▪ Widget လေး: သင်၏ antivirus ကိုလုံခြုံရေးအဆင့်အတန်းအပေါ် up to date ဖြစ်နေနေနှင့်တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူပြဿနာများကိုဖြေရှင်း **
▪ဘက်ထရီ Booster: တိုးချဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်း
▪မှတ်ဉာဏ် Booster: နောက်ခံ apps များ၏မှတ်ဉာဏ် (RAM) ကိုတက် Free နှင့်သင့် device ကိုအရှိန်မြှင့်
▪သိုလှောင် Cleaner: Remove မလိုချင်တဲ့ဖိုင်တွေနဲ့ apps များ
▪ Track မှာ Data အသုံးပြုမှု: ဒေတာကန့်သတ် Set နှင့်အသုံးပြုမှုစောင့်ကြည့်
antivirus လုံခြုံမှု & Web Protection Scanner
▪မိုဘိုင်း antivirus ကိုလုံခြုံရေးပေါင်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှား: State-Of-The-Art antivirus ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုပြီးဖိုင်များ, ကို SMS, SD ကဒ်, apps များနှင့်အင်တာနက်ဒေါင်းလုဒ်များမှအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကုဒ်အဘို့အကင်။ anti-malware tool ကို malware ရဲ့ Real-time ထောက်လှမ်းပေးစွမ်းသည်။
▪ကို Safe Web ကို: အန္တရာယ်များက်ဘ်ဆိုက်များမှလုပ်ကွက် access ကို
▪ကို Safe ဝိုင်ဖိုင်: ARP အလှည့်စားမှုတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များကနေအကာအကွယ်ပေးတယ်
▪မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး Scan ကို: ရှာပြီးတစ်သန့်စင်ဘို့ကူးစက်ရောဂါဖယ်ရှားပေး, ထိရောက်မိုဘိုင်း device ကို
* ခေါ်ရန်, SMS ကို blocker နှင့် SMS ကိုအထက် Android ဗားရှင်း 4.4 (KitKat ကို) နှင့်အတူ device များအတွက်မရရှိနိုင်ပါ restore ။
ဒေသခံသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာ SMS ကိုအဖိုးအခသငျသညျအခြို့သော antivirus ကိုလုံခြုံရေး features တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ
** အန်းဒရွိုက် 5.1.1 နှင့် / သို့မဟုတ်အန်းဒရွိုက် 6.0 အသုံးပြုသူများက Widget လေး, App ကို Lock ကို, App ကို Profile ကိုဖွင့်ဖို့ McAfee ကမိုဘိုင်းလုံခြုံရေးတို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းပေးသနားတော်မူရပါမည်
ဒီ app ကိရိယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုသည်
ဒီ app ကိုအသုံးပြုနိုင်မှုန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်
* McAfee က LiveSafe နှင့် McAfee က All Access အသုံးပြုသူများသည်အလိုအလျှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့, ဆုရ antivirus ကို app ၏ပရီမီယံဗားရှင်းလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ Device ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရ?
သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုရှာဖွေသင့်ရဲ့ကျောထောက်နောက်ခံ-up, အချက်အလက်ကိုရယူရန်သင့်မှတ်ပုံတင်ကိုအီးမေးလ်နှင့်အတူ mcafeemobilesecurity.com/ အတွက် Log ။ ဖုန်းခြေရာခံနိုင်အောင်ရိုးရှင်းတဲ့ဖူးပါ။
20.33 ကို MB
McAfee က LLC
ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2016 မှာ 6: 25 ညနေ
Account စာမျက်နှာကို mcafee ကို log in ကိုဘယ်လို .. ဆဲလ်ဖုန်းအရေအတွက်ကိုအတည်ပြု .. ကိုယ့်အခြားအဆင့်သို့မရွှေ့နိုင်သလဲ
ဇန်နဝါရီလ 18, 2016 မှာ 6: 39 နံနက်
ငါ၏အသော့ဖွင့် pincode အခု, ငါ့ဖုန်းပေါ်မှာသူ့ရဲ့အသုံးမကျနေရာမပေးခဲ့ပါဘူးဘယ်သို့ရှိသမျှတို့ကိုငါအကောင့်ဖေါ်ပြခြင်းသူတို့ကိုဆက်သွယ်ငါသူတို့ McAfee ကို ပြု. အဘယ်ကြောင့်သူတို့သည်ငါ၏ device ကိုအပေါ်မှာငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ကိုမတှေ့နိုငျလို့ပြောမှာမကြည့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်, ကမ်းလှမ်း theyre ကအကြောင်း 1,000 ရဲ့ devices များအဘယ်သူမျှမနောင်တနှင့်အတူသော့ခတ်ငါ့အားဤသို့ပြု
ဇူလိုင်လ 17, 2015 မှာ 4: 04 နံနက်
ဒါပေမယ့် nod32 ဟာ android ဖုန်းအားလုံးဗိုင်းရပ်အလွန်ကောင်းသော, အသေဖြစ်၏ !!
Danny Grant က Phiri says:
ဇွန်လ 27, 2015 မှာ 12: 46 နံနက်
ဘယ်လိုအသစ်များ apk ကော? ဒီမှာတဦးတည်းအတော်လေးခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ 24, 2014 မှာ 6: 47 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 16, 2014 မှာ 10: 59 နံနက်
အလွန် NYC ..
ဇူလိုင်လ 25, 2014 မှာ 10: 54 ညနေ
McAfee က app ကိုအလွန်အသုံးဝင်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ပါသည်
Ahmed ကလီ Sonu says:
ဇူလိုင်လ 16, 2014 မှာ 10: 15 ညနေ
၎င်း၏အလွန် comforteble antivirus ကို။
မိုဟာမက် Eleash says:
မတ်လ 7, 2013 မှာ 10: 41 နံနက်
မေလ 18, 2014 မှာ 10: 21 ညနေ